Dị ka onye mere ọrụ nke ọdịnaya, nkwukọrịta, na ịkọ akụkọ, enwere m ọnọdụ pụrụ iche n'ime obi m maka ọrụ nke "gburugburu". Ihe anyị na - ekwupụta - ma ọ bụ n'achụmnta ego ma ọ bụ na ndụ nke aka anyị — ga - abara ndị na-ege anyị ntị uru naanị mgbe ha ghọtara ihe ozi ahụ pụtara. Na-enweghị gburugburu, ọ pụtara ihe furu efu. Na-enweghị gburugburu, ndị na-ege ntị na-enwe mgbagwoju anya banyere ihe kpatara gị ji agwa ha okwu, ihe ha kwesịrị iwepụ, yana, n'ikpeazụ, ihe kpatara ozi gị
Nke a bụ vidiyo nke abụọ, yana Chantelle Flannery, na vidiyo onye edemede anyị mepụtara maka ntọhapụ nke Corporate Blogging for Dummies. Tupu taa, anyị bipụtara vidiyo izizi, yana Douglas Karr. Ebumnuche anyị nke vidio ahụ na ntinye aha ha na saịtị Corporate Blogging Tips bụ: ịkwalite mwepụta nke akwụkwọ, Corporate Blogging For Dummies. Na-akwado saịtị na ụlọ ọrụ ntanetị na Twitter na Facebook. Na-akwalite mụ na Chantelle n'ụlọ ọrụ na-ezi ozi
Rocky Walls na Zach Downs sitere na Media iri na abụọ gbadara DK New Media office and shot video of Chantelle and I for a couple vidiyo anyị chọrọ ka na Corporate ịde blọgụ Atụmatụ na saịtị. Nke a bụ oge dị egwu. Onweghi nke ederede ederede ma obu megharia. Anyị nyochaa ihe mgbaru ọsọ anyị tupu oge ịse: Na-akwalite mwepụta nke akwụkwọ, Corporate Blogging For Dummies. Na-akwado saịtị na ụlọ ọrụ ịde blọgụ
Ọgụgụ M Na-esote: Mgbasa Ọgụgụ
Tuzdee, Machị 25, 2008 Monday, March 7, 2016 Douglas Karr
Ihe na-esote na ndepụta ọgụgụ (nke na-agbakọ elu) bụ Mgbasa Ọgụgụ. The mma folks na Wiley zitere m ahịa Book - ha ga-ghọtara na m a ọkpọ maka Marketing akwụkwọ. Maka ndị gị nke na-ezere akwụkwọ azụmaahịa dịka ihe otiti mana ọ na-amasị ịmụ omume mmadụ human nke ahụ bụ ihe m hụrụ n'anya gbasara akwụkwọ ahịa. Otu onye jụrụ m otu oge ma m gụrụ akwụkwọ Sociology. Eche m na m nwere na a